The Ab Presents Nepal » गुल्मीको एउटा विद्यालयमा ४४ वर्ष देखि यसो गरिदै आएको छ सुन्दा अचम्म लाग्छ सक्छ पुरा पढेर कमेन्ट गर्नु होला !
गुल्मीको एउटा विद्यालयमा ४४ वर्ष देखि यसो गरिदै आएको छ सुन्दा अचम्म लाग्छ सक्छ पुरा पढेर कमेन्ट गर्नु होला !
अनिल खत्री, गुल्मी – ; गुल्मीमा उउटा बिद्यालयमा रोलनम्बर १३ सुन्दा पनि मानिस झसकिन्छन् । सुन्दा अचम्म लाग्न पनि सक्छ । तर जिल्लाको एउटा विद्यालयमा झण्डै ५ दशकदेखि एउटा रोल नम्बर १३ नराखि बिद्यार्थीको हाजिरी गरिर्दै आएको छ। जिल्ला सदरमुकाम तम्घासको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ९ मा रोल नम्बर १३ नलेखेको अहिले ४४ वर्ष वढि पुगेको छ । विद्यालयको कक्षा ९ मा पढ्ने विद्यार्थीहरूले रोल नम्बर १३ सुनेका छैनन् । विद्यार्थीहरू मात्र होइन, शिक्षकहरू पनि रोल नम्बर १३ बाट निकै टाढा छन् ।
२००९ सालमा स्थापना भएको बिद्यालय हाल उक्त बिद्यालयमा १२ कक्षासम्म पढनपाठन हुँदै आएको छ ।बिज्ञान, शिक्षा बिज्ञान, मानबिकी, व्यवस्थापन १२ सय वढि बिद्यार्थीहरु पठन पाठन गर्दै आएको बिद्यालयले जनाएको छ । जिल्लाकै सामुदायिक बिद्यालयमा उत्कृष्ट बिद्यालयमा परिचित छ । बिद्यालय नमुना बिद्यालयको रुपमा छनोट समेत भएको छ । बिद्यालयमा पढ्न जिल्ला र छिमेकी जिल्लाहरुमा समेत बिद्यार्थीहरु आउने गर्दछन्